Sidee baan ka AcomData Hard Drive soo kaban karto, Files?
Ceshano Xogta laga AcomData Hard Drive in 3 Talaabooyinka
1 Sidee baan ka AcomData Hard Drive soo kaban karto, Files?
Waxaan la isticmaalayo ah 500GB AcomData drive adag dibadda hadda. Aabbe si qalad ah waxa kaliya haatan formatted. Waxaa jira qoysas fara badan oo qiimo leh ku yaal, oo aan waqti ma loo wareejiyo aan computer leeyihiin. Haatan waxaan isagoo arrinta soo kabashada xogta. Baryayaaye, ii sheeg sida inuu ka soo kabsado files ka AcomData drive adag. Mahad badan!
Ha noqon mid aad u murugo leh. Formatting Shil waa mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee arrintan khasaaro xogta. Halkan xaqiiqada dhabta ah ee aad AcomData khasaaro xogta drive adag, faylasha lumay la waayay doonaa weligiis kaliya marka xogta cusub waxa ay ku soo overwrites. Sidaas, kaliya aad u baahan si ay u joojiyaan gelinaya wixii macluumaad cusub oo aad drive AcomData adag oo ay helaan barnaamijka xogta AcomData kuwa talosaaran drive adag si ay kuu caawiyaan.
Halkan waa talo: Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac . Waa gaar ah oo loogu tala galay inuu ka soo kabsado files laga badiyay, tirtiray, kharribeen iyo formatted ka drive AcomData adag. Iyadoo qaababka ay waxtar leh oo khatar la'aan, waxaad awoodi doontaa inay ka soo kabsadaan ku dhowaad dhammaan noocyada kala duwan ee noocyada file ka adag drive AcomData, oo ay ku jiraan images, document files, videos, files audio, files archive, iwm
The Best Software Hard Drive Recovery
Taageerada kabashada xogta ka bin recycle, drive adag, kaadhka xusuusta, flash drive, camera digital iyo camcoders
OS taageerayaan: Windows 10/8/7 / XP / Vista, Mac OS X (Mac OS X 10.6, 10.7 iyo 10.8, 10.9, 10,10 Yosemite) on iMac, MacBook, Mac Pro iwm
2 ka AcomData Hard Drive soo ceshano Data in 3 Talaabooyinka
Aan u qabtaan soo kabashada la Wondershare Data Recovery for Windows hadda. Dadka isticmaala Mac, waxa kale oo aad kala socon kartaa hage la version Mac.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada ah si ay u bilaabaan AcomData kabashada xogta drive adag
Marka socda korontada on your computer, waxaad heli doontaa 3 kabashada hababka: "lumay Recovery File", "Recovery Barzakh", iyo "Recovery File ceeriin ah".
Waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery" sida isku day ah oo hore.
Fiiro gaar ah: Fadlan hubi in aad AcomData drive adag in si wanaagsan loo xiran karo your computer sameeyo.
Tallaabada 2 baarista drive AcomData adag
Hadda oo kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan warqad drive aad AcomData drive adag ee suuqa kala barnaamijka oo guji "bilow" badhanka si ay u bilaabaan iskaanka for files lumay it on.
Si aad u soo kabsado xogta ka formatted AcomData drive adag, fadlan firfircoon "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 Ladnaansho files ka AcomData drive adag
Ugu danbeyn, dhammaan faylasha helay on your AcomData drive adag lagu soo bandhigi doonaa in uu furmo. Oo waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan kuwa files aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" badhanka si ay u badbaadin on your computer.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha ka reebay in ay aad drive AcomData adag ee files soo kabsaday.
USB Drive ceeriin Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga ceeriin USB Drive
Sida loo badbaadi MMS Faylal ay ku iPhone in Computer ah
Sidee in ay tirtirto xijaab in Windows 10
Siduu u External Hard Drive Recovery ah Barzakh,
Siduu u Pretec Data Recovery
Siduu u USB PQI Flash Drive Recovery
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos & Videos ka Nokia 5800
Wondershare Data Recovery - Recovery ceeriin
> Resource > Ladnaansho > Siduu u AcomData Hard Drive Data Recovery